Cat si anya diaspore - Aluminom oxide hydroxide - Cat si anya utịp - Video
Tags Cat anya, diaspore
Cat diaspore, makwaara dị ka diasporite, bukwara empholite, kayserite, ma ọ bụ tanatarite, bụ mineral aluminium oxide hydroxide, α-AlO (OH), iti mkpu na sistemụ orthorhombic. Ma isomorphous na goethite. Ọ na - eme mgbe ụfọdụ dịka kristal na - emebi emebi. Mana ọ na - abụkarị ka lamellar ma ọ bụ scaly pụta, mbara ala ahụ dị larịị bụ ntụzi nke njigide zuru oke. A na-achọ ịmata ụzọ nke ọma. Diporere enweghị agba ma ọ bụ elso greyish-white, nwekwara odo, mgbe ụfọdụ violet na agba. Ọ dịgasị iche site na translucent ruo transperent. Ọ nwere ike ịbụ na ọ dị iche na mineral ndị ọzọ enweghị agba na-enweghị atụ. Site na ịchachasị nke ọma na mkpụrụ osisi pel dị ka mica, talc, brucite, na gypsum site na ike siri ike nke 6.5 - 7. Oke ike a kapịrị ọnụ bụ 3.4. Mgbe a na-ewe iwe dị ọkụ tupu ịmịga ya, ọ na-agbadata n'ike n'ike, na-agbasa n'ime akpịrịkpa na-acha ọcha.
Ngwurugwu na-eme dị ka ngwaahịa mgbanwe nke corundum ma ọ bụ emery. A na - ahụ ya na nkume nkume granular na nkume ndị ọzọ dị oké nkume. A na-achọta kristal dị mma na emery nkwụnye nke Urals. Na Chester, Massachusetts. Nakwa na kaolin na Schemnitz na Hungary. Ọ bụrụ na a ga-enweta ya n'ọtụtụ buru ibu, ọ ga-abụ nke akụ na ụba dị ka isi iyi nke aluminom.
Diaspore, tinyere gibbsite na boehmite, bụ ihe bụ isi nke aluminum metal bauxite.
Ndị Csar, ndị ottomanite, na zultanite bụ aha ahia maka diaspore dị mma, nke a makwaara dị ka Turkish diaspore, si n'ugwu İlbir nke dị n'ebe ọdịda anyanwụ Turkey.
N'ọmụmụ ihe, nyocha, nkwurịta okwu ma ọ bụ pusi anya, ọ bụ mmetụta ngosi gosipụtara anya na ụfọdụ nkume. Site na French "uzo nke nkata", nke pụtara "anya nkịta", nkwurịta okwu na-esite ma ọ bụ site n'usoro ụbụrụ nke ihe onwunwe, dịka nlegharị tourmaline, ma ọ bụ site na fibrous inclusions ma ọ bụ cavities n'ime nkume, dị ka anya cat chrysoberyl. Ihe ndị na-eme ka ndị mmadụ na-akparịta ụka bụ ihe dị mkpa. Ihe nchoputa a na-enyocha amaghi ihe omuma nke tubes ma o bu ihe eji eme ihe. Akwukwo a na-eme ka ha kwado kwekorita anya na anya nke anya. Ngwunye nke nkedo nke nkedo ahụ bụ otu n'ime atọ axis kokophombic nke chrysoberyl, n'ihi ngbanwe na nhazi ahụ.
Cat si anya diaspore si Turkey. Video